अक्षय कुमारसँग डराएकै हुन् त सलमान खान? कारण यस्तो…. – सडक मिडिया
बलिउडमा राज गरेका नायकको कुरा गर्दा अग्रपंक्तिमा नायक सलमान खान र अक्षय कुमारको नाम आउँछ। यी दुबै नायकका फिल्मले बक्स अफिसमा धमाका मच्चाउँदै करोडौंको व्यापार पनि गर्दछन्।
यी दुबै नायकमा कसको फिल्मले कति व्यापार गर्ने? कसको फिल्म बक्स अफिसमा हिट हुने लगायतका कुरामा प्रतिस्पर्धा भैरहन्छ। झन् सँगै दुबैको फिल्म आएमा त अझै रोचक भैदिन्छ त्यो विषय दर्शकलाई।
लकडाउनका कारण फिल्महरू रिलिज हुन सकिरहेका छैनन्। काम ठप्प छ। यसले गर्दा बलिउडलाई ठुलो घाटा भैरहेको छ। केही फिल्महरू अनलाइन रिलिज पनि भैसकेका छन्। यस्तोमा दर्शकहरूलाई व्यग्र प्रतीक्षा छ सलमान र अक्षय अभिनित फिल्मको। अक्षय कुमारले आफ्नो फिल्म `सूर्यवंशी´ लिएर आउँदैछन् भने सलमानले फिल्म `राधे´ लिएर आउने कुरा छ।
खबरका अनुसार यी दुबै फिल्म तिहारमा रिलिज हुने कुरा थियो। फ्यानहरू यी दुबै फिल्मको टक्कर हेर्न हतारिइरहेका थिए। तर अब आफ्नो फिल्मलाई लिएर सलमान पछि हटेको खबर आइरहेको छ। अक्षयको फिल्म `सूर्यवंशी´ दिवाली २०२० मा रिलिज हुने पक्का भैसकेको छ तर सलमानको फिल्मको रिलिज डेट टुंगो छैन।
के सलमान डराएका हुन् त अक्षयसँग भिड्न? जहिले पनि कुनै चाडपर्व, विशेष दिवालीको मौका पारेर आफ्नो फिल्म रिलिज गर्ने सलमान किन पछाडि हटे त? यो कुराले फ्यानहरू अचम्मित भएका छन्। वास्तवमा, वर्तमान परिस्थिथितिलाई मध्यनजर गर्दै सलमानले कुनै रिस्क लिन चाहन्नन्। अक्षयसँग भिड्दा आफूलाई बेफाइदा हुने देखेर नै सलमान पछि हटेका हुन्।
अक्षयको फिल्मको बक्स अफिसमा उधुम मच्चाउने पक्का छ तर केही समयदेखि फ्लप फिल्म दिइरहेका सलमानको फिल्मले के कस्तो व्यापार गर्ला त्यो यसै भन्न सकिन्न। त्यसैले नै सलमान आफ्नो फिल्म रिलिज गर्ने मौकाको खोजीमा छन् ।
Tagged अक्षय कुमार, सलमान खान
Previous Post: दुखद खबर : बाढीपहिरोले २३ को मृ’त्यु, ३४ बेपत्ता
Next Post: ॐ लेख्दै जान्नुहाेस् तपाईंकाे आज, सम्पुर्ण मनाेेकामना पुरा हुनेछ
पवन मधुश्रीको हृदयस्पर्शी गीत ‘आमा’ – भिडियो 213 views